Ndeupi musiyano uripo pakati peCalvinism neArminianism? ▷ ➡️
Ndeupi musiyano uripo pakati peCalvinism neArminianism? Calvinism neArminianism inzizi mbiri dzekufunga mukati mechiKristu izvo kuyedza kutsanangura hukama uripo pakati peruponeso, humambo hwaMwari, nesimba revanhu rekusarudza. Iyo Dzidziso dzaCalvin inotarisa zvakanyanya kuhutongi hwaMwari uye arminianism inotarisa zvakanyanya kurusununguko rwekusununguka. Bhaibheri rinotaura nezvezvose zviri zviviri.
1 Kwakatangira gakava
2 Ndeupi musiyano uripo pakati peCalvinism neArminianism?
3 Ndeipi chaiyo?
Calvinism uye Arminianism akasimuka panguva imwe chete. Calvinism yakavakirwa pamafungiro emurume anonzi John Calvin uye Arminianism yakavakirwa papfungwa dze Jacob Arminius. Vateveri vevarume vaviri ava vane (uye nanhasi vane) makakatanwa pamusoro pemisiyano muzvinzvimbo zvavo.
Calvinism payakange yave kufarirwa, vateveri vechiArminianism vakanyora nezvezvimwe zvinhu zvavasina kuwirirana nevaCalvinist. Ivavawo, vakasimbisa nzvimbo yavo mukupindura. Saka zvakatanga gakava rakakura rakagara kwemazana emakore.
Musiyano mukuru pakati peCalvinism neArminianism ndeuyu kuti ruponeso runoshanda sei. ChiCalvin chinoti hatina vhoti pazviri; Arminianism inoti tinogona kusarudza.
Dzidziso dzaCalvin dzidzisa izvozvo Mwari ndivo changamire pazvinhu zvese. Naizvozvo, anosarudza waanoda kununura. Hapana munhu anogona kuzvinunura kuburikidza nekuda kwake, nekuti tese takabatwa nezvivi. Asi Mwari vanopa kumwe kutenda kuti vaponeswe. Hakuna munhu akasarudzwa naMwari anogona kuramba ruponeso. vese vachaponeswa nekumanikidza.
Sezvaakatisarudza maari pasati pasikwa pasirese, kuti tive vatsvene vasina mhosva pamberi pake,
kurumbidzo yekubwinya kwenyasha dzake, dzaakatiita kuti tigamuchire muMudiwa »
VaEfeso 1: 4-6
Arminianism gamuchira hutongi hwaMwari uye nenyaya yekuti hakuna munhu anogona kuzvinunura nekuedza kwake. Mwari anotipa ruponeso rwemahara, asi zvakare inopa munhu mumwe nemumwe sarudzo. Hakuna munhu anosungirwa kutenda uye nekuponeswa.
Tarira, ndimire pamukova ndichigogodza; Kana munhu akanzwa inzwi rangu uye akavhura musuwo, ini ndichapinda kwaari ndodya naye, uye iye neni.
Zvakazarurwa 3: 20
Mumwe musiyano ndewekuti Jesu akauya kuzoponesa. Iyo Dzidziso dzaCalvin dzinodzidzisa kuti Jesu akafa kuti aponese vakasarudzwa chete, kuti Mwari akavasarudza kuti vave nekutenda. Iyo Arminianism inodzidzisa kuti Jesu akafira vanhu vese, asi avo chete vanotenda ndivo vachaponeswa.
Nekudaro, zvakanyanya MaCalvinists havatendi kuti isu tiri "zvidhori" zvaMwari. Vanogamuchira kuti isu tine simba rekuita sarudzo, asi kwete maererano neruponeso. Vazhinji vateveri ve MaArminianism zvakare haatendi kuti tinoponeswa nemabasa kana zvakafanira. Vanogamuchira kuti ruponeso ndirwo rwese rwamwari; nyore isu tine simba rekuramba ruponeso irworwo.
Pakati pevaCalvinists nevatsigiri veArminianism pane zvakare nharo pamusoro pekuti zvinoita here kuti mutendi arasikirwe neruponeso. Iyo Dzidziso dzaCalvin dzinoti hazviite. Kune rimwe divi, Arminianism inoti zvinogona kudaro, asi hapana chokwadi.
Iko hakuna mhinduro yakajeka kumubvunzo uyu. Bhaibheri rinoti Mwari ndiye akasimba pazvinhu zvese, asi kuti takasunungukawo kuita sarudzo. Hapana chinoitika pasina mvumo yaMwari, asi vanhu vanoitawo zvinhu izvo Mwari zvaasingade.
Mubvunzo weruponeso wakafanana nemubvunzo wehuku nezai. Ndeupi akatanga kuuya? Kuda kwaMwari here kana kutenda? Bhaibheri haripindure! Mwari haana kuganhurirwa kumitemo yenguva, pamberi nepashure. Iyo ndeyekusingaperi uye inogona kudzokera kumashure, kumberi uye munzira ipi neipi munguva. Zvine musoro here kuyedza kutsanangura chiito chaMwari mune zvepanyama?
Bhaibheri rinoti Mwari vane masimba pazvinhu zvese. Asi, mukutonga kwake, inotibvumidza kuita sarudzo. Isu tinonyeverwa kuti tisaramba ruponeso urwo Mwari rwaanotipa, asi tinovimbiswawo kuti Mwari vachatichengeta mukutenda.
Es hazvigoneke kuzivisa kuti rumwe rutivi rwakarurama, sei bhaibheri haritsananguri. Semuenzaniso, ndima yaJohani 3:16, Inogona kushandiswa kuratidza kuti Jesu akafira chete vakasarudzwa vanotenda uyezve kuratidza kuti Jesu akafira vese asi avo chete vanotenda ndivo vanoponeswa sezvo vhesi ichingoti avo vanotenda munaJesu vachaponeswa uye havana kutarisa urwu rudzi rweruzivo.
Nehurombo, zvinowanzoitika kuti munhu anoita kunge ane kutenda anosiya Jesu. Zvinoenderana neCalvinism, munhu uyu handina kumbove nekutenda kwechokwadi, saka hainyatso kuponeswa. Zvinoenderana neArminianism, izvi zvinogona kuve humbowo hwekuti zvinokwanisika kurasikirwa neruponeso kana munhu achinyatsoda kuramba Jesu.
Bhaibheri rinoti vamwe vanhu vanoedza Jesu, asi vobva vamuramba. Zvisinei, hazvitauri kana vanhu ava vachaponeswa kana kwete. Naizvozvo, zvinonyanya kukosha ndezvekusingaperi.
Nekuti hazvigoneke kuti avo vakambovhenekerwa uye vakaravira chipo chekudenga, vakaitwa vagovani veMweya Mutsvene,
uye ivo zvakare vakafarira shoko rakanaka raMwari uye nemasimba ehupenyu huchauya,
uye vakadzokazve, kuvandudzwa kutendeuka, vachizvirovererazve pachavo Mwanakomana waMwari nekumufumura vituperation.
VaHebheru 6: 4-6
Izvi ndizvo zvazviri! Tinovimba chinyorwa ichi chakabatsira iwe kuti uzive ndeupi musiyano uripo pakati pechalvinism neArminianism. Kana ikozvino iwe uchida kuziva ndeapi mutsauko mukuru pakati pevaKaturike nemaPurotesitendi, ramba uchivhura Tsvaga.Online.